Sicir Bararkii Ugu Ba’naa Oo Laga Soo Sheegayo Dalka Turkiga – WARSOOR
Sicir Bararkii Ugu Ba’naa Oo Laga Soo Sheegayo Dalka Turkiga
TURKIGA – (WARSOOR) – Xaddiga sicir-bararka sanadlaha ah ee Turkiga ayaa kor u kacay in ka badan boqolkiiba 36, waana sare u kacii ugu sarreeyay muddo 20 sano ah.
Qiimaha gawaarida lagu raaco ayaa kor u kacay in ka badan kala bar, iyadoo qiimaha cuntada iyo waxyaabaha daruuriga ahna uu sare u kacay in ka badan boqolkiiba 40.
Sanadkii la soo dhaafay qiimaha lacagta Turkiga ee Lira ayaa ku dhowaad kala bar hoos u dhacay.
Waxay sanakdii hore boqolkiiba 44% ka hoos martay doollarka Mareykanka, haddana maanta ayay 5% hoos u sii dhacday.
Hoos u dhaca lira hayaa qiimaha waxyaabaha la soo dhoofiyo qaali ka dhigay.
Madaxweyne Erdogan ayaa heerka dulsaarka ku tilmaamay inay tahay “hooyada iyo aabbaha xumaanta”.
Khudbad jeediyay ayaa wuxuu ku sheegay in Turkiga uu wajahayo isbeddel dhaqaale.
Wasiirka Wasaaradda Isgaadhsiinta iyo Tiknoolajiyadda oo kulan la yeeshay Ururka Warbaahinta Mareegaha Somaliland ee (SOMA)
Iran oo wacad ku martay inay u aargudi doonto Soleimani haddii Trump aan maxkamad lasoo taagin